Ungayifaka kanjani iMacOS Mojave ku-Mac "engasekelwa" | Ngivela kwa-mac
Kukhona indlela yokufaka iMacOS Mojave kulawo makhompyutha i-Apple engayibuyekezi ngokusemthethweni futhi namuhla yikho kanye esizokubona. Kulokhu, into ebalulekile ukuthi kucace ukuthi inqubo eyinkimbinkimbi ngandlela thile futhi ngeke kube lula sengathi i-Apple uqobo ivumele ukufakwa kuma-Mac ethu angasekelwa.
Into enhle kakhulu ukuthi unjiniyela uzakhele ithuluzi lakhe esivumela ukuthi senze ukufakwa okungaxakeki kangako, kepha nangayo Akuyona inqubo elula futhi idinga izinyathelo zakho. Ithuluzi lokuvuselela ama-patches abizwa nge-Patch Updater nalo liyangezwa, into eyaziswa kulawa macala.
Kule vidiyo ka dosdude1 inqubo singayibona ngendlela elula ngaphansi nje kwengxenye yehora. Ngokufakwa kwe-MacOS Mojave, uchungechunge lwezidingo luyadingeka ukuthi sishiye ngemuva kwevidiyo futhi kusobala ukuthi isichibi esenziwe yi-dosdude1 sokufakwa lokho idinga isifaki se-USB esingu-16GB. Konke lokhu sizokuthola encazelweni yevidiyo futhi sizishiya ngezansi kwevidiyo.
IMac Pro, iMac, noma iMacBook Pro 2008 kuqhubeke
IMacBook Air noma iMacBook Unibody aluminium ngasekupheleni kuka-2008 noma kamuva
I-White Mac Mini noma iMacBook ekuqaleni kuka-2009 kuqhubeke
Xserve kusuka ekuqaleni kuka-2008 noma kamuva
Uhlu lwe-Mac ezingahambisani nalolu hlelo ukufakwa Yilezi:
Ungayibuyekeza kanjani iMacOS Mojave
IMac Pro, iMac, iMacBook Pro neMac Mini kusuka ngo-2006-2007
Kusekelwa iMac7,1 ka-2007 kuphela uma i-CPU ithuthukiselwe kwi-Core 2 Duo esePenryn, njenge-T9300
IMacBook4,1 -MacBook Air kusuka ngo-2008 (MacBookAir1,1)
Into ebaluleke kakhulu ukuba nethuluzi Patcher Ithuluzi litholakala kumanuwali nakwincazelo yevidiyo. Uma kwenzeka udinga ulwazi oluthe xaxa noma unezinyathelo eziseduze ungabona iwebhusayithi kanjiniyela lapho uzothola khona kunemininingwane yonke yale ncwajana yokufaka. Manje usunakho konke okudingayo ukuze ukwazi ukubona iMac yakho ingasekelwa yi-MacOS Mojave futhi uzophatha ukunquma ukuthi kufanele yini ukwenza lokhu kufakwa noma cha.
Esikushoyo ngale nqubo yokufaka iMacOS Mojave yilokho lokhu akubona bonke abasebenzisi be-mac Njengoba inqubo yokufaka engeyona elula futhi ingahle ingasebenzi nhlobo ku-Mac yethu ngenxa yezinkinga zokuhambisana nemidwebo, kungenzeka ukuthi kukhona ukwehluleka ngokuxhumeka kwe-WiFi, i-Bluetooth, ukwehluleka kutrackpad noma okufanayo. Lokhu yinto umthuthukisi nomdali wesifundo asitshela ngayo, ngakho-ke akuyona into okufanele ibuyele kithi uma kwenzeka ukungasebenzi kahle kwe-MacOS Mojave.
Ngakolunye uhlangothi, angikweluleki ukufakwa kwemishini edingekayo ekusetshenzisweni kwansuku zonke, emsebenzini noma okufana nalokhu okungenhla. Ngakho-ke okokuqala konke ngithi ngaphezu kokufakwa kokuqina okuthe xaxa kunokujwayelekile, konke kungenzeka kungasebenzi kahle kwi-Mac yethu ngaphandle kokusekelwa kwe-MacOS Mojave. Kungumsebenzi womuntu ngamunye ukwenza ukufakwa noma cha futhi ithimba lakwaSoy de Mac alinacala nganoma yiziphi izinkinga ezingavela ekufakweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayifaka kanjani iMacOS Mojave ku-Mac "engasekelwa"
UJosep Perez kusho
Okokuqala ngiyabonga ngeqhaza lakho.
Ukulandela izinyathelo engizifakile iMojave kwi-iMac 12,2 yami futhi indlela isebenzile, kepha ngemuva kokusetha kabusha isikrini sikhombisa yonke imibala eshintshiwe.
Ngicabanga ukuthi kufanele kube nokungahambisani okuthile nemidwebo yekhompyutha.
Phendula uJosep Pérez
Umbuzo ungakufanelekela lokho? futhi ulahlekelwe ukusebenza okuningi? Ngoba lapho kubuyekezwa, ngaphezu kokusixwayisa ukuthi kungahluleka futhi kufanele kuqale phansi, akukho ukukhuluma ngokusebenza
Ngiyifakile ku-Imac kusuka maphakathi no-2010 futhi imibala iyashintshwa nemidwebo mibi. Lapho behambisa amawindi bayavaleka.
Sawubona. Nginenkinga efanayo. Imibala ishintshiwe futhi okubomvu kunyamalele. Noma yisiphi isixazululo?
Nginenkinga efanayo, ngabe usitholile isisombululo?
Ngiyajoyina, kwenzeka into efanayo kimi nakwabanye abanemibala
Ngiyifakile ngasekupheleni kuka-2009 iMacBook Unibody futhi isebenza kahle kakhulu. Ngayifaka nakwi-MacBook Air ka-2010, futhi isebenza kahle futhi. Ngabe usugwebile izinketho ezisethwe ngumakhi we-patch kumodeli ngayinye ekugcineni kokufakwa?
Yebo, iyasebenza, ayisebenzi kahle kakhulu, kuya ngokuthi uyisebenzisa kanjani, konke kuzokusebenzela noma cha. Ihamba kancane kakhulu, futhi uhlelo lwaphahlazeka ngosuku lokuqala. Futhi akusebenzi ukufana, noma i-virtualbox, ngaphandle kokuthi yiwindows XP. Bekufanele ngibuyele emuva ku-OS X El Capitan futhi yonke into ibiphelele futhi, noma kunjalo ngiyabonga, kufanele uzame. IMacBook Pro 17 ″ 5,2 Mid 2009. I-SSD 8GB ye-RAM kakhulu ingayihlomisa. Cabanga ngakho ngaphambi kokuyifaka. ukubingelela
IMacBook Pro 13 »ngasekupheleni kuka-2011,
Imidwebo: I-Intel HD Graphics 3000 512 MB,
Umseshi: 2,4 GHz Intel Core i5
16gb inqama ne-ssd.
Kufakwe ngaphandle kwenkinga, kepha okushiwo abanye abasebenzisi, ngesichibi segrafu angikaze ngikuqaphele. Kepha uma i-pc, i-virtualbox nezinye izinhlelo zokuthuthuka noma zokuqamba zihamba kancane, ngeke ngikutshele.
Ngiyayithanda kakhulu itimu emnyama abayethule eMojave, kepha, akukufanele kimi ukuthi ngisebenza nsuku zonke ku-mac, ayilungiselelwe kahle, nge-laptop yami.
Umnikelo omuhle kunjiniyela we-patch +1!
URuben Reyes kusho
Faka iMojave kwiMacbook pro 2011, imodeli 8.2. ngaphandle kwezinkinga ezinkulu. Ngilandele inqubo yonjiniyela wepatch. Kodwa-ke, kulabo abathatha isinqumo sokukwenza, ngemuva kokufaka i-oneve, ngeke kuqale, kufanele baqale ku-usb ngokufakwa bese basebenzisa isichibi, ekugcineni iwindi elivula ngezansi kwesobunxele. Lapho babheka imodeli ye-Mac yakho bese basebenzisa i-patch ehambisanayo. Ngempela, esimweni semodeli yami, ihluzo ze-radeon ezinikezele azisebenzi ngokusheshisa. Ngizamile ukufaka i-pro cut 10.4.5 yokugcina futhi ithi igrafu ayisekelwa. Kodwa-ke, ukulandela esinye isifundo ngalo msunguli ofanayo, ngikhubaze imidwebo ye-radeon ne-voila ngemidwebo ehlanganisiwe eyi-Intel hd 3000, i-Final cut pro, inguqulo yakamuva, isebenza kahle kakhulu. Kepha yebo, lapho kukhutshazwa isithombe esizinikele, ukulawulwa kokukhanya akusebenzi noma kumiswe lapho kuvalwa isembozo. Omunye komunye. Njengesiphetho, konke kusebenza ngaphandle kwalokhu engikushilo, usengakushiya ngaphandle kokukhubaza igrafu, kepha izinhlelo ezinjengokusika kokugcina okudinga ukusheshiswa ngeke zisebenze. Abanye abathanda i-logic pro x basebenza kahle futhi ukusebenza kuhle impela, kuphindwe kayishumi kunokubhekana nephupho elibi le-High sierra elingakaze lisebenze kahle ngokulinganisela kwikhompyutha yami.
Phendula uRubén Reyes
UJosé Carlos kusho
IMacBook Pro maphakathi no-2009
I-Fusion Drive 1,12 TB
Kuhamba kahle kakhulu. Izinkinga zombala wesikrini zixazululwa ngokususa inketho yokuveza obala kusuka kuzinketho zesikrini sokungeneka.
Okuwukuphela kwento engasebenzi ikhamera ye-iSight efakwe ohlwini engekho.
Ukusebenza kubushelelezi kakhulu, mhlawumbe ngoba imidwebo yale modeli iyi-nVidia hhayi i-ATI. Zonke ezinye izingxenye zikhulu.
Phendula uJosé Carlos
Alexander ,. kusho
UCarlos, noma yisiphi isincomo sokuthi usinikeze isifundo sokuthi ungakwenza kanjani? Angikwazi ukufinyelela ihluzo kuFinal. I-photosho isebenza kahle kepha angisiboni isithombe kunoma yiluphi uhlelo lokuhlela.
The Dude kusho
Ulilande kanjani ifayili lokufaka? Ku-AppStore ingitshela ukuthi ayisekelwa futhi ayingivumeli ukuthi ngiyilande.
Phendula i-The Dude
Kulungile. Ngivele ngabona ukuthi ingalandwa nge-patcher
Ngine-macbook pro 2011, 13 ″ inch ekuqaleni kuka-2011
iprosesa: 2.3GH3 Intel core i5
Imemori: 8GB 1333 mH3 DDR3
Imidwebo: Intel HD ihluzo 3000 512 MB
IMAVERICKS OS X 10.9.5
Bengifuna ukwazi ukuthi ungashintsha yini kusuka ku-maverick uye ku-mojave? Futhi uma kungenzeka, kungenziwa kanjani uma kungatholakali ukulanda ku-App Store ???
Sawubona, inani eliphakeme ongalifaka kuleyo khompyutha ngokusho kwe-Apple yile:
I-MacOS High Sierra 10.13.6 (17G65)
Ukulandela okokufundisa kwendatshana, angazi noma ungadlula iMojave kulelo thimba, yize kufanele
Kusebenze kahle kimi! Emoyeni we-Macbook maphakathi no-2011 i-Core i5 ne-2G evela kuRam.
Ama-patches asetshenzisiwe ayasebenza nayo yonke into ihamba kahle, ingcono kakhulu kune-sierra ephezulu
Ngilanda kanjani ikhophi yeMojave?
Uma ulandela isifundo se-dosdude1.com ngeke ulahlekelwe. Ungase futhi uphume eMojave kusuka lapho.
Ngiyisebenzisa ku-2009 MacBook Pro (16 Gb RAM ne-SDD) futhi iqiniso ukuthi azikho izinkinga ezinkulu. Kumelwe ngisho ukuthi angisebenzisi i-Office noma i-Photoshop noma yini enjalo. Okokuzenzakalela kwehhovisi okuncane engingakudinga, nginezinhlelo zeGoogle efwini, nalokho engikushiyile.
Kodwa-ke, nginombuzo okufanele ngiwubuze: kaninginingi ungitshela ukuthi kufanele ngithuthukele ku-Big Sur, engingafuni ukukwenza, okungenani okwamanje. Futhi nginokungabaza okukhulu ukuthi kungaqala. Kepha ngokungasamukeli lesi sibuyekezo, akuvumeli ukuthi ngilande ezinye izibuyekezo ezingangithakazelisa (iziqeshana zokuphepha zeMojave, izibuyekezo zePrinta, njll.). Noma yikuphi ukusikisela?